पोखरा गीता शान्तिमार्ग महिला समूहको अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा ईशु गौतम चयन – Samacharpati
पोखरा गीता शान्तिमार्ग महिला समूहको अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा ईशु गौतम चयन
पोखरा, १३ असोज । पोखरा १० रामघाट स्थित गिताशान्ति मार्ग महिला समूहको आठौ साधारण सभा तथा चौथो अधिवेसन सम्पन्न भएकाे छ । यस अधिवेसनबाट २ बर्ष का लागि अध्यक्ष पदमा ईशु गौतमलाई सर्वसहमत चयन गरिएकाे छ । यसैगरी उपाध्यक्षमा शान्ति सुवेदी , सचिवमा मन्जु भण्डारी , सहसचिवबमा सबिता गिरी कोषाध्यक्षमा मन्धरा गौतम,सहकोषाध्यक्षमा बिन्दा के.सी सर्वसम्मत चयन भएका छन् । त्यसैगरि सदस्यहरुमा तीला सुवेदी, शान्ता गौतम ,दुर्गा गौतम, सुभद्रा भुजेल ,देवी गिरी,सरस्वती गौतम ,जमुना बराल, ईन्दु गौतम र मिरा गौतम चयन भएका छन । त्यसै गरि आन्तरिक लेखा अनुगमन समिति पनि गठन भएको छ जस अन्र्तगत संयोजक , नानीमाया गौतम, सदस्यमा मिना गिरी , र पार्वती गौतमलाई चयन गरिएको छ ।
यस कार्यक्रममा एस.ई.ई. परिक्षामा उत्रिण सदस्यहरुका छोरा छोरीहरुलाई सम्मान गरिएको थियो । साथै संस्थाका २०७४—०७६ कार्यकालमा बिभिन्न उपसमितिमा रहेर संस्थालाई योगदान दिने कार्यक्रम संयोजकहरुलाई समेत सम्मान गरिएको थियो । पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं १० का वडासदस्य दिपक बहादुर थापाको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम संचालन भएको थियो ।
उद्धघाटन पछि बोल्दै प्रमुख अतिथि थापाले संस्थाका दिदीबहिनीहरुले संस्थालाई असल सामाजिक संस्थाका रुपमा अगाडी बढाएकोेमा खुशी ब्यक्त गरेका थिए । उनले महिलाहरु को हातमा समाज परिर्वतनको सांचो रहेको बताएका छन । साथै थापाले यस महिला समूहले समाज रुपान्तरणका लागि उल्लेख्य योगदान पुर्याएकोमा खुशी समेत ब्यक्त गरे । कार्यक्रममा वडा नं १० की वडा सदस्य निशा मल्ल ठकुरी,संस्थापक अध्यक्ष निर्मला कार्की भण्डारी ,गिताञ्जली साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष शिव प्रसाद गौतम, रामघाट महिला समूहकी अध्यक्ष अनिता तिमिल्सीना, गौतम बुद्ध महिला समूहकी अध्यक्ष खगीसरा पहारी लगायतले बालेका थिए ।
कार्यक्रममा स्वागत मन्तब्य संस्थाकी उपाध्यक्ष ईशु गौतमले राखेकी थिईन । संस्थाको आर्थिक हिसाब किताव संस्थाकी कोषाध्यक्ष मन्धरा गौतमले प्रस्तुत गरेकी थिईन भने संस्थाका बार्षिक गतिबिधि सहित प्रगती प्रतिवेदन सचिव सान्ति सुवेदीले प्रस्तुत गरेकी थिईन । पोखरा १० बुद्धचोक स्थित सत्कार पार्टी प्यालेसमा आयोजना गरिएको थियाे । साधारण सभा तथा अधिवेशन संस्थाकी अध्यक्ष माया दुवाडीको अध्यक्षतामा संम्पन्न भएको थियो भने कार्यक्रम सस्थाकी सचिव शान्ति सुवेदीले संचालन गरेकी थिईन ।
प्रधानमन्त्री ओलीद्धारा बकर–इदको शुभकामना व्यक्त
रुकुम पश्च‍िम कोरोनामुक्त जिल्ला बन्यो
स्वास्थ्य प्रवन्ध मिलाएर पार्टी प्यालेस संचालन गर्न पाउनुपर्ने व्यवसायीको माग
बकर ईदको अवसरमा प्रचण्डको शुभकामना सन्देश
कास्की काँग्रेसद्वारा क्रियाशील सदस्य तिमिल्सिनाको निधनप्रति दुःख व्यक्त
बकर इदका अवसरमा गण्डकी प्रदेश प्रमुख शेरचनको शुभकामना
सबै प्रकारका रोगहरूका सेवा दिने गरी महेन्द्रपुलमा अन्नपूर्ण सिटी क्लिनिक सञ्चालनमा
पर्सामा पत्रकारसहित ७३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
आज जनै पूर्णिमा देशभर नव यज्ञोपवीत एवं रक्षाबन्धन धारण गरेर मनाइँदै
दुई प्रहरी कर्मचारीमा कोरोना देखिएपछि ट्राफिक महाशाखा सिल
धरानमा ९ जना कोरोना संक्रमित फेला
अस्ट्रेलियामा पहिलो निशुल्क नेपाली फोटो प्रतियोगिता हुदै
थाइल्याण्डमा ६/४ म्याग्नीच्युडको भूकम्प
सर्वज्ञमान विष्णुदेवी सँस्कृति पुरस्कार प्रा.डा. जगमानलाई